Ezimbili storey indlu - iphupho kwanoma iyiphi ungumdlali ngubani ihlela emzini wakhe "Maynkraft". Iqiniso lokuthi kwenye indawo, ungakha ezindaweni ezimbili nje abahlala lapho izogcina izinto zakho, ukudala elingaphakathi design kanye nje ukuchitha isikhathi. Nokho, ngokuvamile kakhulu emva ukwakhiwa ezimbili storey abadlali endlini usukhathele benyuka izitebhisi, futhi baphonsa phansi yabo yesibili. Uma ungafuni ukuba uthanda lokhu kwenzeka kuwe, khona-ke udinga ufunde indlela yokukwenza lift ku "Maynkraft" ngaphandle Mods. Kunezindlela ezihlukahlukene ongakhetha, okungase isinyathelo ngokusebenzisa ezihlukahlukene amadivaysi, kodwa iningi lazo ukusebenzisa ubuchwepheshe kutholakala kuphela izinguqulo. Nokho, kukhona lift elula abangekho ezikhangayo, kodwa functional kakhulu ukuthi kuyokusiza ukuba ngokushesha ukuhamba phakathi izibuya.
Ngakho, uma unentshisekelo indlela yokwenza lift ku "Maynkraft" akukho Mods, khona-ke engcono ukhethe lokhu. Kulokhu, njengoba lift ume izibhebhe ezimbili nje. Njengoba ungacabanga, lokhu akubonakali namaqiniso kakhulu, kodwa ungakwazi fihla ezihlukahlukene imihlobiso. Kulokhu, into esemqoka - kungcono ukusebenza lokho kumane langa. Ngakho, ngosizo plate amabili, ungakwazi ukuxhumanisa ndawonye iyiphi emabhilidini amabili, ibekwe lokuqala kwesinye phansi, kanye nezinye - olwesibili. Ngeshwa, ukusebenzisa le ndlela awukwazi ukwakha ikheshi multi-storey. Nokho, ungakwazi ukwakha amanye amadivayisi ezincane ephakamisa yokuxhuma nomunye pair of izindaba. Kodwa indlela yokwenza lift ku "Maynkraft" Mods ngaphandle kokusebenzisa amalebula wedwa?
Le mibhalo ezibhebheni
Ngakho, uzodinga izibhebhe ezimbili ukwakha ikheshi olulodwa. Uma ufuna ukufunda ukwenza lift ku "Maynkraft" akukho Mods, khona-ke kufanele ufunde indlela yokubhalwa uphawu, ngoba ke imfihlo enkulu.
Njengoba wazi kahle, bonke ithebhulethi, kukhona imigqa emibili, lapho ungafaka ezihlukahlukene nezinhlamvu, amazwi ngisho imisho. Kulokhu, umugqa wokuqala isetshenziselwa ukuchaza, okungukuthi, awusebenzi nomthelela inqubo. Lapha, ngokwesibonelo, ungacacisa phansi noma yini enye inombolo ofuna. Kodwa lapha emgqeni wesibili kufanele uqaphe ngokwengeziwe, ngoba unesibopho nomsebenzi we-ikheshi. Ngakho, kudingeka ufunde amaqembu amabili nje - Phakamisa futhi Phakamisa Down, ngubani ngokubhala kumele ebiyelwe kubakaki. Ngakho, umyalo wokuqala kukuvumela ukuba uthole esitezi esingenhla, futhi lo omunye - phansi ngezansi.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela "Maynkraft" ukwenza udladla ngaphandle Mods. Nokho, namanje kungenzeka zingasebenzi.
Uma uke kahle obhalwe ngapha nangapha amapuleti, ibekwe umbhalo elichaza umugqa wokuqala, futhi zisebenza - ku yesibili, kufanele sibuyele phansi ngenhla uma kwesokudla chofoza ipuleti okudweba nombhalo othi Phakamisa. Noma kunjalo, konke ngisho simple, futhi uma ufuna ukufunda indlela "Maynkraft" ukwenza udladla ngaphandle Mods, kufanele ukuthola it out.
Ukuze lokhu ikheshi sase sisebenza, kubalulekile ukubona ukuthi amapuleti amabili kukhona emgqeni efanayo mpo, okungukuthi, umuntu ngaphezu kwamanye. Ngisho noma wena miss iyunithi eyodwa nje, ikheshi ngeke zisebenze. Uma zonke izimo zifeziwe, ke uma kungavela awunankinga, futhi kuyomelwe lift akho, okuzokwenza kweso uthumele you fike phansi kwelinye. Lona lift best Minecraft ngaphandle Mods. Kodwa ethile yayo - kuba ukungabakhathaleli nhlobo ukubukeka.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi ungakwenza kanjani ku "Maynkraft" lift mechanical ngaphandle Mods, kodwa ukubonakala design ayiyinhle. Kuyinto amalebula ezimbili nje, ezingalotshwanga ifuze ngokoqobo. Uma ufuna khuphula yakho wayebona isimo njengoba sinjalo, bese kufanele ukuxhuma amehlo akho engqondo. Ungase udinge ukuhlobisa izindonga, engeza ezinye amabhlogo azosiza ukwakha ngeso of ikheshi. Ngokwemvelo, izobuye ibe neze, kodwa akukho okunye. Okuningi ikheshi obusebenzayo ngeke ukuthole, ngakho mina kufanele anqume ukuthi yini ebaluleke kakhudlwana - ebaluleke ngaphezu ukubukeka indlela umsebenzi. Futhi uma into yesibili ngawe ekutholeni kahle ukuthi lift ikhambi ephelele bonke izinkinga nge ukunyakaza phakathi izibuya.
Yekuchumana mayelana nendlela "GTA 5" bathengisa izimoto
Hyde iqhawe: "Dota 2", the Moon
Njengoba e "Maynkraft" ukwenza indlu epholile futhi kanjani ukukhetha indlu
Amahhotela 5 *: Hilton Fujairah kuyona, United Arab Emirates, Fujairah. Ukubuyekeza, incazelo ihhotela
Ukuqamba ezingaba: essence yayo kanye nezindlela kokuhlaziywa